Ogbugbu mmiricolor - kachasị mma mmiricolor maka ndị ikom na ndị inyom
Idebe echiche nke mmiri na-egbuke egbuke maka ụmụ nwoke na ụmụ nwanyị
Uche nke tattoos mmiricolor
Dị ka mma mara mma, atụmatụ ndị a na-anọchite anya ihe ndị na-emetụtakwa. Ogbugbu nwere ike ịbụ ihe nnọchianya nke ebe nchekwa, ngosipụta nke nkwenkwe nke onye, ​​nkwupụta nke ịhụnanya anyị maka ndị na-agafe ma ọ bụ nanị ụdị ụdị ọrụ. Ụdị mpempe mmiri na-emekarị bụ nke nnụnụ na ụmụ ahụhụ.
A na-ejikarị akwara mmiri na-egbuke egbuke na-akọwa ndụ, olileanya, metamorphosis na ịmaliteghachi. Okpokoro mmiri mmiri dị ka rose na-egosi ịhụnanya na ịma mma ebe lotus na-egosi ịdị ọcha. Otu n'ime akwara fure kachasị mma bụ nke ifufe na-efesa, nke na-anọchite anya ịhapụ nhụsianya na nnwere onwe ndụ.
Ihe odide a na-emekarị bụ nke na-egbu egbu egbu mmiri. Ighachi na nchapu nke agba na-anọchite anya mmetụta onye, ​​echiche ma ọ bụ ọbụna echiche. Ihe ndị dị iche iche dị iche iche na-akọwa n'ụzọ dị iche site na ndị na-ekiri ya.
Eche egbu egbu mmiricolor maka ụmụ nwanyị
Na-egbu egbu mmiricolor maka ụmụ agbọghọ
Mmiri mmiri azụ azụ azụ maka ụmụ agbọghọ
Aka mma mmiricolor maka ụmụ agbọghọ - Nkebi nke 1
Aka akara mmiri maka ụmụ agbọghọ - Nkebi nke 2
Egwuregwu mmiricolor maka ụmụ nwanyị
Mmiri na-acha ụta akpụkpọ ụkwụ maka ụmụ nwanyị
Akụkụ mmiri na-egbu mmiri maka ụmụ agbọghọ
Mmiri mmiri gbanwere akịka aka maka ụmụ agbọghọ
Watercolor ubu aka maka ụmụ agbọghọ
Egwuregwu na-acha mmiri mmiri maka ụmụ agbọghọ
Mkpịsị mmiri na-acha azụ mmiri maka ụmụ agbọghọ
Egwuregwu ndị na-egbuke egbuke mmiri maka ụmụ nwanyị
Eji egbu egbu mmiricolor maka ụmụ nwoke
Na-acha mmiri na-egbuke egbuke maka ụmụ nwoke
Mmiri na-acha uhie mmiri maka ụmụ nwoke
Egwuregwu mmiricolor ụkwụ maka ụmụ nwoke
Egwuregwu mmiri na-acha ogwe aka maka ụmụ nwoke
Ogbugbu mmiri na-egbuke egbuke maka ụmụ nwoke
Ebe nnocha mma nke tattoos mmiricolor
Ọnọdụ nke nhazi nke mmiri mmiri egbu egbu dị oke mkpa dị ka ị na-ahọrọ imewe ziri ezi. Ebe egbu egbu na-adabere n'ogo egbu egbu. Ogbugbu ka ukwuu na-adọrọ mma mgbe a na-etinye ya n'ebe dị elu dịka azụ, afọ, ụbụrụ, ụkwụ na ubu, ebe obere tattoos dị mma maka obere mpaghara dịka nkwonkwo ụkwụ, nkwojiaka, spine, azụ ntị na ọbụna mkpịsị aka.
Ụfọdụ ndị mmadụ nwere ihe mgbochi mmekọrịta ọha na eze na ndị ọkachamara n'inweta inked. Nye ọtụtụ ndị dị n'ụdị a, akara aka na ebe ndị nwere ike ịfụkọta dị mfe bụ ihe dị mma dịka ụfụ, ebe ikpuchi.
A na-eme ka mgbu mmiri na-egbu ngwa ngwa ma ọ bụrụ na ejighị nlezianya ejide ya. Nke a pụtara na ọ na-echebe ya pụọ ​​na ìhè anyanwụ ma na-emetụ aka mgbe ọ bụla ọ dị mkpa. Achịcha mmiricolor kachasị mma na-egbukepụ akpụkpọ anụ dịka onk na-egbuke egbuke na-aghọwanye ihe doro anya na ụdị igbu egbugbu a. Ọ kacha mma ịhọrọ ebe a na-ekpuchi ma ọ bụ ebe a na-agbanyeghị aka maka igbu egbugbu.
Ntuziaka nkwado maka igbu egbu
Ihe ole na ole a ga-echetara tupu igbu egbu bụ:
Iri nri kwesịrị ekwesị tupu ị na-aga igbu egbugbu dika aru enwe ume iji gwọọ egbu egbu nakwa iji gbochie agụụ na-egbu oge mgbe igbu egbugbu dị ogologo. Debe onwe gị na oge niile.
Yiri uwe ndị dị mma iji wepu ma ọ bụ dọpụta ya dabere na ebe a ga-egbu egbu.
Kwadebere ya na nlekọta niile dị mkpa iji mee ka igbu egbugbu dị ka ọgwụ ogwu ma ọ bụ gauze antibacterial. Ọ ka mma ịjụ onye na-egbu egbu na mbụ banyere ihe niile dị mkpa ịzụrụ.
Ụdị mgbochi mmiri mmiri
Achịcha mmiricolor bụ ụdị ụdị egbugbere ọnụ ndị e kere site na mgbochi na nchapụta nke agba. Ngwakọta dị iche iche nke agba na-eme ka ọ maa mma. N'ihe dị iche iche n'ụdị dị iche iche, nchịkọta nke nhazi ọkwa bụ ihe ịma aka. Isi nke abụọ dị iche iche dị iche iche na-adabere n'obere nnweta isi ojii.
Watercolor akwara na-enweghị Black isi -
Achịcha mmiri na-enweghị isi ojii bụ ihe eji egbu egbu na-enweghị ihe osise ma ọ bụ ọrụ akara. Na-emepụta tattoos nke dị ka ihe osise mmiri. Ụdị akwara ndị a na-agbapụta agbapụ dị ka ikwakọta na akpụkpọ ahụ ma sie ike ịmata. Na-adabere kpamkpam na agbacha agbaji nke imewe ka ọ bụrụ ihe na-adọrọ adọrọ.
Mmiri na-acha mmiri na-acha odo odo
Achịcha mmiri na-acha odo odo bụ atụmatụ na-arụ ọrụ ụfọdụ. A na-emezi agba ahụ na ọrụ ndị a. Ọrụ akara skeletal na-enye ihe dị iche iche dị iche iche na-atụle ndị na-enweghị isi ojii. Ọtụtụ ndị na-egbu egbu na-ejide isi ojii maka ihe abụọ. Ihe mbụ kpatara ya bụ ikike nke ntọala ojii ka ọ na-eto nwayọọ nwayọọ ma ihe nke abụọ kpatara ya bụ enweghị atụ nke onye tattooist ahụ na-eziputa atụmatụ n'emeghị ka ọ dị ala.
Ụdị egbu egbu mmiricolor
Mmiri mmiricocolor Floral- Ogbu mmiri nke na-acha mmiri mmiri bụ ndị a kasị mara amara dịka ọ na-abata na agba na agba. Ihe ntancha kachasị na-emepụta bụ nke roses, lotus, sunflower, daffodils, tulips, okooko na okooko lili. A na-eme nke a dị ka otu okooko osisi ma ọ bụ ụyọkọ na-enye ya ihe dị mma.
Ntube mmiri watercolor tattoos- Ngwurugwu dị mma maka iji ya mee ihe dị ka mmiri na-egbu egbu mmiri dịka ndị a nwere ụdị agba agba nke na-ele anya nke ọma. Onye na-egbu egbu nwere ike ịgwakọta ọtụtụ agba na ịmepụta ihe osise dị iche iche.
Uwe mmiri na-egbu mmiri- Uwe mmiri na-acha mmiri mmiri na-eleba anya n'ahụ onye na-ebu ihe dịka ọ nwere mma mara mma nke na-asọ ma na-adọrọ mmasị. Nchikota agba agba otutu na ogwe aka na-eme ka ọ bụrụ anya mbụ.
Egwuregwu mmiri na-egbu mmiri na-ekpo ọkụ- Mgbochi mmiri na-egbuke egbuke bụ ihe ndị ọzọ na-ewu ewu nke ọtụtụ ndị na-ahọrọ. N'adịghị ka mgbochi anụ ọhịa wolf kpụkọrọ akpụkọ, mgbu mmiri na-emepụta ihe na-eme ka ọ bụrụ ihe na-achọsi ike maka ndị na-ekiri ya.
Azụ watercolor tattoos- Achịcha azụ bụ ihe ọzọ na-ewu egbu egbu ka ọ nwere ọdịdị dị mma. Idebe egbu egbu na mmiri na utịp na-egbu egbu site na iji ojiji na-egbuke egbuke na splashes.
Hummingbird mmiricolor tattoos- Okpo akwara Hummingbird bụ ihe ndị mara mma iji mepụta ka ọ na-agbapụ nku ya n'ọgba ọsọ ọsọ, na-enye mmetụta dị nfe na njem ya ma dị mfe iji egbu egbu mmiri mmiri.
Ụzọ a ga - esi egbochi ngwa ngwa na - agbapụ aka mgbu mmiri
Ogbugbu mmiricolor na-adọrọ adọrọ ka ọ na-adabaghị na tụnyere omenala ọdịnala. Ịgba agba agba ọkụ na tattoos na-agbakwụnye nhụsianya nke ịda ngwa ngwa. Achịcha mmiri na-acha nwayọọ nwayọọ mgbe arụmọrụ kwesịrị ekwesị. Nke a gụnyere:
Họrọ onye na - ese egwu - Onye na-ese ihe na ọtụtụ ahụmahụ a na-egbu egbugbu ga-eme ka e jide egbugbu site na usoro ndị na-egbochi ngwa ngwa ngwa ngwa. Na-ahọrọ onye tattooist gị mgbe niile site na ịjụ ha ka ha nye ha ụdị ọrụ ha gara aga. Onye na - enweghị ahụmahụ na - ahụ maka ọrịa na - enweghị ike ịme akwara mmiri ka ọ na - achọ ụfọdụ aka na esemokwu.
Debe ya na ìhè anyanwụ - Ihu anyanwụ dị njọ na-emetụtakwa na ochie nakwa dị ka akara ọhụrụ. Ọ bụrụ na ị na-egbu egbu maka ìhè anyanwụ, ọ ga-eme ka ọ daa ngwa ngwa. Ojiji nke elu ike anyanwụ na-ekiri ihu igwe iji gbochie mmetụta nke ìhè anyanwụ site na igbu egbugbu gị kachasị aro. Ikpuchi mkpịsị aka site n'inye ejiji dị ka ọ ga-enye aka gbochie ịda mbà.
Debe anụ ahụ ike - Mma nke igbu egbu nwere ike ịdị ogologo oge mgbe akpụkpọ ahụ e kere ya dị mma. Ihe oriri na-edozi ahụ, ezigbo hydration na ụra dị mma na-arụ ọrụ dị mkpa n'ịhụ na egbu egbu dị ọhụrụ
Moisturize - Ngwunye hydrating moisturizer dị oké mkpa iji gbochie nkwụsị ahụ, na-asọ oyi na ịnwụ site na akpụkpọ ahụ ma debe ya nke ọma. Iji mmanu na-esi ísì ụtọ na-adọrọ adọrọ mma nke ọma na-eme ka ọnyá na-egbu ngwa ngwa na iji gbochie ịla n'iyi.
Na-egbochi ịcha - Ntucha na ebe ndị na-emekarị nchịkọta ga-eme ka njide dị ngwa ngwa. A na-atụ aro ya ka ị ghara itinye nkwụcha n'elu ụkwụ gị ma ọ bụ aka.
A na-eme ka ịcha mma mmiri na-enweghị ihe ọ bụla kwesịrị ekwesị ma ọ bụrụ na e jiri ya tụnyere omenala omenala ndị chọrọ ederede kwesịrị ekwesị. Achịcha mmiri na-enye ndị na-ese ihe nnwere onwe ịmepụta ihe ndị pụrụ iche na ntanye nke agba. A pụrụ ịmepụta akwara mmiri na-egbuke egbuke nke ụdị ọ bụla, onye tattooist nwere nkà n'ichepụta egbugbu mmiri.
Tags:egbugbu maka ụmụ agbọghọ egbu egbu maka ụmụ nwoke egbu egbu mmiri
aka mma akaokpueze okpuezenduru akwarana-adọ aka mmannụnụakara ntụpọna-egbu egbun'olu olurip tattoosenyí egbu egbuegbu egbuọnwa tattoosenyi kacha mma enyiegbu egbu diamonddi na nwunyeakwara obiegbu egbu hennaỤdị ekpomkpaEgwu ugoụmụnne mgbuụkwụ akaegbugbu egbugbuechiche egbugbuAnkle TattoosNtuba ntugharincha nrọndị na-egbuke egbukeudara okooko osisizodiac akara akaraegbu egbu egbuakpụkpọ ụkwụ na-egbuke egbukeaka akaọdụm ọdụmazụ azụagbụrụ ebomehndi imeweegbu egbu maka ụmụ nwokeegbu egbu ebighi ebindị mmụọ oziegbu egbu osisi lotusaka akangwusi pusiegbugbu maka ụmụ agbọghọUche obiakwara isiarịlịka arịlịkadragọn dragọnmma tattoosegbu egbu mmiriegbu egbu egbu